Fampiharana Vaovao Amin’ny Finday, Manampy Ny Belorosiana Hanara-maso Ny Fihoaram-pefy Amin’ny Fifidianana Ho Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2015 5:25 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, 한국어, 繁體中文, 简体中文, English
Sary: Fangon'ny Vochy tao amin'ny fampiharana Vochy, fifidianana avy amin'i Hayley Warren ho an'ny Tetikasa Noun . Natambatr'i Tetyana Lokot.
Napetraka hanampy amin'ny fanangonana torohay mikasika ireo fihoaram-pefy ataon'ny mpifidy mandritry ny fifidianana ho filoham-pirenena ho avy eo ny fampiharana iray vaovao amin'ny finday novokarin'ny andianà tsy miankina mpanaramaso fifidianana ao Belarosia.
Hatao ny 11 Oktobra 2015 ny fifidianana filoham-pirenena manaraka ao Belarosia. Io no ho fihazakazahana fanindiminy ho an'ny filoham-pirenena amperinasa, Alyaksander Lukashenka, 60 taona, izay efa teo amin'ny fitondrana hatramin’ ny 1994 fony vanimpotoanan'ny repoblika Sovietika.
Nandritry ny fepotoana niasàny dia nokianin'ny Tandrefana i Lukashenka noho ny fanitsakitsahany zon'olombelona sy ny famoretany ireo mpanohitra ara-politika, izay nitarika ho any amin'ny tsy fisian'ny fanoherana politika tena izy. Niteraka fidinana an'arabe goavana ny fahalaniany faninefany indray tamin'ny 2010, izay notsenain'ny herisetran'ny polisy, ary mpirotsaka ho fidiana avy amin'ny mpanohitra sy mpanao hetsi-panoherana marobe no nosamboriny sy nofonjainy.
Na ho inona anefa, misy mpirotsaka hafa isaina amin'ny rantsan-tànana hifaninana amin'i Lukashenka amin'ity indray mandeha ity, isan'ireny ireo solontenan'ny mpanohitra, araka izany dia tena hisy marina ny fifidianana, na dia andrasan'ireo mpaneho hevitra politika hibata tsy misy olana ny fandresena fanindiminy aza i Lukashenka.
Ireo mpamorona ny “Вочы” (Vochy, “Maso” amin'ny fiteny Belarosiana ) dia manantena fa hanampy amin'ny fanitarana ny fahalalàn'ireo olompirenana ny zotram-pifidianana manontolo sy ny zony amin'ny maha-mpifidy azy ilay fampiharana vaovao amin'ny finday. Andrandrain-dry zareo ihany koa izy io hanome fahafahana ho an'ireo mpifidy mba hitatitra malaky ireo fihoaram-pefy amin'ny fifidianana ho any amin'ireo tsy miankina mpanaramaso.
Vantany vao voatatitra amin'ny alàlan'ilay fampiharana, haseho ao amin'ny sarintany iray azo tetezina ety anaty aterineto ireny fihoaram-pefy ireny (sarintany natsangana avy amin'ny fanangonana vaovao eny ifotony iarahana amin'ny Ushahidi), ary avy eo ireo torohay dia azon'ny iraka mpanaramaso ampiasaina handrefesana ny tsy fitanilàna sy ny toerana nahitàna ny tena fihoaram-pefy tamin'ny fifidianana.
Zavatra vaovao iray hafa miavaka ny hoe asongadin'ireo mpamorona ny “Vochy” ny endrika maha-ho an'ny daholobe an'ilay tatitra momba ny fihoaram-pefy : tsy hoe fotsiny afaka mitatitra tsy ankitonona anarana any amin'ireo mpanaramaso ireo olana hitan'ny masony tany amin'ny birao fifidianana ireo mpampiasa azy, fa koa afaka mizara ny tatitra nataony, ny sary, ny lahatsary ety amin'ny tambajotra sosialy.
Amin'ny fandraisany ho anaty kajikajy ny fanarahamaso mivelatra be ampiasain'ny governemanta Belorosiana, raisin'ny tarika ao ambadiky ny “Vochy” amin'ny fomba matotra ny fitazonana ny tsiambaratelo momba ireo mpampiasa azy. Manome toky ireo mpamorona fa tsy manangona angon-drakitra virtoaly momba ireo mpampiasa azy mihitsy ilay fampiharana, afa-tsy ny toerana misy azy tamin'ny nanaovany tatitra ary rakitra vitsivitsy momba ny fitaovana nampiasainy.
Tsy hanangona angon-drakitra manokana na inona na inona mihitsy momba ilay mpampiasa azy ilay fampiharana, afa-tsy ny zavatra fenoin'ilay olona eo am-pandefasana ny tatitra. Na manome an-tsitrapo ny fomba hifandraisana aminy aza ilay mpampiasa mba hahafahany mahazo tamberina, tsy ho aparitaka mihitsy ary tsy hozaraina amin'ny hafa io mombamomba azy io.
Mba hisian'ny asa marintoerana sy tohana ara-teknika haingam-pandeha, manangona ny torohay momba ny fitaovana nampisaina ilay fampiharana. Tsy maka ny torohay momba ny IMEI (International Mobile Equipment Identity) amin'ilay fitaovana kosa anefa.
Amin'izao fotoana izao dia vonona ho an”ireo mpampiasa Android fotsiny aloha ny “Vochy”ary azo trohana malalaka avy ao amin'ny “Google Play store”. Miasa hametraka ny fiteny Belorosiana amin'izy io ireo mpamorona azy amin'izao fotoana izao (amin'ny fiteny Rosiana ilay efa misy ankehitriny).
Ny “Vochy”, fampiharana natao hitaterana fihoaram-pefy amin'ny fifidianana, dia vokatry ny fiarahana miasa teo amin'ireo fandraisana andraikitry ny tsy miankina ho fanarahamaso ny fifidianana ao Belarosia : ElectBy, “Fanarahamaso Fifidianana: ambony latabatra sy fampiharana,” “Ny zo hisafidy,” sy “Mpiaro zon'olombelona ho amin'ny fifidianana malalaka.” Mampanantena hamoaka vokatra savaranonando avy amin'ny fandalinana ireo fihoaram-pefy nalefan'ny mpifidy sy ny asan'ireo mpanaramaso ao amin'ny tranonkalan'ny ElectBy.org ireo mpanaramaso, andro iray aorian'ny fifidianana, ny 12 Oktobra 2015.